Suuqa:Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala-iibsiga – Garsoore Sports
Suuqa:Wararkii Ugu Dambeeyay…
Suuqa:Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala-iibsiga
Fabrizio Romano ayaa sheegay in Massimiliano Allegri uu yahay mudnaanta koowaad oo ay tahay inuu qabto shaqada tababarenimo ee Real Madrid, inkastoo ay jiraan xiiso ay u qabaan kooxdiisii hore ee Juventus iyo Napoli. Allegri ayaa ah beddelka ugu cad cad ee Zinedine Zidane haddii uu ka tago caasimada Spain. Inkastoo uu xaqiijiyay usoo bixitaanka afarta sare, tababare Andrea Pirlo ayaa loo badinayaa inuu ka tagayo Juve.
Inter waa inay iibisaa hal xiddig – Lautaro Martinez ama Alessandro Bastoni – sababo la xiriira xaaladdooda dhaqaale, sida uu sheegayo Corriere dello Sport. Martinez ayaa lala xiriirinayay kooxaha Barcelona iyo Real Madrid, halka Bastoni uu xiiso ka helay kooxaha Liverpool iyo Manchester City. Waxaa sidoo kale jira warar la isla dhexmarayo oo ku saabsan mustaqbalka tababare Antonio Conte iyo xiddigga Romelu Lukaku, kaasoo lagu soo waramayo inay raadinayaan kooxaha Chelsea, Barca iyo Madrid.
Telegraph ayaa sheeganeysa in Manchester United ay mudnaanta siineyso saxiixa xiddigga Borussia Dortmund Jadon Sancho, kaasoo muddo dheer lala xiriirinayay inuu ku biirayo Red Devils. Saaxiibkiisa Dortmund Erling Haaland ayaa sidoo kale laga doonayaa Old Trafford, halka Super Star-ka Juventus Cristiano Ronaldo lala xiriirinayo soo laabasho xiisa leh.
Tottenham ayaa xiiseyneysa inay dib u shaqaaleysiiso Mauricio Pochettino, sida ay qortay Independent. Pochettino ayaa leyliya Paris Saint-Germain kaddib markii uu bedelay tababare Thomas Tuchel bishii Janaayo laakiin wuxuu awoodi waayey inuu kormeero difaacashada horyaalka xilli ciyaareedkan. Taas oo dhalin karta in la tuso albaabka looga baxo garoonka Parc de Prince.
Kooxaha Bayern Munich iyo Barcelona ayuu diiradda u saaran ciyaaryahanka Liverpool Georginio Wijnaldum oo ay kula soo wareegayaan beeca xorta ah, sida uu sheegayo Sky Sports.
Bogga hore ee maanta ee majaladda Corriere dello Sport ayaa lagu qoray in tababaraha Porto Sergio Conceicao uu ugu cadcad yahay inuu bedelo Gennaro Gattuso oo ka tirsan Napoli, halka kan dambe la filayo inuu beddelo Simone Inzaghi oo ka tirsan Lazio, Tababarihii hore ee Roma Paulo Fonseca ayaa ah dooqa koowaad ee ugu horreeya ee kubiiri kara Fiorentina.